Xiligan ayaa la furi doonaa goobaha jimicsiga iyo dabaasha. - NorSom News
Xiligan ayaa la furi doonaa goobaha jimicsiga iyo dabaasha.
Sida lagu sheegay shir jaraa´id oo ay maanta qabatay reysulwasaaraha Norway, waxey dowladu ogolaatay in laga bilaabo isniinta soo socoto oo taariikhdu ay tahay 15-ka bisha Juni, dib loo furi doono goobaha jimicsiga (treningssenter). Sidoo kale waxaa dib loo furi doonaa goobaha dabaasha.
Dowlada ayaa wali shuruud adag ku xirtay goobaha dabaasha iyo jimicsiga, si looga hortago faafitaanka xanuunka covid-19.
Xigasho/kilde:Både treningssentre, badeland og svømmehaller kan gjenåpnes fra mandag
Previous articleDowlada oo rabta in qofkii halis ah Norway, maxkamad la´aan laga qaado baasaboorka.
Next articleSomalia og utbryterstaten Somaliland i samtaler